Tourism Oslo: Iyo yezhizha gungwa ruzivo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Tourism Oslo: Iyo yezhizha gungwa ruzivo
Kuputsa Kufamba Nhau • Norway Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuenda kumahombekombe muNorway kunogona kuve kunopisa zhizha ruzivo. Zvinenge zvese zviri mukati mekufamba chinhambwe muOslo, kusanganisira iwo mahombekombe. Oslo fjord iri ipapo, uye kuvandudzwa kwazvino kwenzvimbo yepakati peOslo kwagadzira sarudzo huru dzekuita mvura. Heano dzimwe nzvimbo huru dzekuzorora kwemadhorobha kushambira.
KuNorway, unogona kunge uri kure nekurota kweMediterranean yezhizha, asi zvakadaro, pane zvakawanda zvingasarudzwa padyo kuti unakirwe nekushambira uye yatinosheedza pano se "zhizha" pasina muripo.
Guardian yatora nzvimbo yepakati yekushambira seimwe yemadziva egungwa ekushambira gumi muEurope. Yakavhurwa muna Chikumi 10, Sørenga idziva hombe remvura ine mvura yegungwa padyo neOpera imba. Icho chikamu chepaki yemaeka mashanu, nzvimbo yemahara yeruzhinji iyo inopa dziva rekushambira, gungwa, jeteni dzinoyangarara, mabhodhi ekudhira, mashawa ekunze, dziva revana rakaparadzana, nzvimbo dzine huswa uye nzvimbo dzepikiniki pamatanda emapuranga.
Iyo Sørenga dziva yakavhurika kune veruzhinji uye yemahara gore rese.
Tjuvholmen Guta Gungwa riri kumucheto kwechitsuwa cheTjuvholmen, kumagumo kweAstrup Fearnley Sculpture Park. Iwo mahombekombe pachawo ane hurungudo, uye akakwana kuvana. Kana iwe uchida kuenda kunoshambira, zvinokwanisika kusvetuka kubva kunze kune pier kunze kwegungwa.
Kana iwe uchida kushambira zvishoma kunze kweOslo Center, zvitsuwa izvi ndezvenyu. Zvitsuwa zvitatu zvakabatana muOslo Fjord nenzvimbo huru dzekushambira nekushambidza zuva, kunyanya kumabvazuva kweGressholmen uye kumaodzanyemba kweRambergøya. Heggholmen ine imwe yedzimba dzekare dzemwenje muOslo Fjord.
Zvitsuwa zvinogona kusvikwa nechikepe kubva kuCity Hall Pier 4 muzhizha.
Rambergøya nenharaunda dzekuchamhembe kweGressholmen inzvimbo dzinochengetedzwa, uye bay iri pakati pezvitsuwa zviviri iyi inzvimbo yakakosha yekudyira shiri dzegungwa. Kubva mukupera kwezana ramakore rechi19 Heggholmen yaive nharaunda diki yemabhizimusi, uye Gressholmen yaive nzvimbo yendege huru yekutanga yeNorway yakavambwa muna 1927.